अप्रत्याशित हरीराज खेवा तिगेला - [2005-11-27]
राजकीय प्रज्ञाप्रतिष्� ानबाट आयोजित क्षेत्रीय नाटक उत्सव-२०५३ पूवाचंलमा प्रदर्शित नाटक
-१)	रजनी - शरदको श्रीमती
-२)	शरद - रजनीको श्रीमान्
-३)	अवशेष - युवक
-४)	राजेश - शरदको साथी
-५)	इन्स्पेक्टर -
-६)	प्रहरी - १ -
-७)	प्रहरी - २ -
लेखक: हरीराज खेवा तिगेला
(एउटा को� ा जहा“ सामान्य सजावट छ । रातको १२ः०० बजेको घण्टी बज्छ । बाहिर हुरी बतास, आकाशमा मेघ गर्जनुको साथै टाढा कुकुर र लाटोकोसेरो कराएको आवाजले रातलाई अझ भयावह तुल्याएको छ । को� ाको एक कुनामा रहेको खाटमा सुतिरहेको रजनी चिच्च्याउ“दै ब्यू“झन्छे )
रजनी	-	-जुरुक्क उ� ्दै) नाई.. नाई... -आ“खा मिच्दै वास्तविकतामा आउन खोज्दै) म... म त आफ्नै को� ामा पो रहेछु । आज मैले ज्यादै नराम्रो सपना खेदे । हे भगवान् हाम्रो रक्षा गर -बाहिरको वातावरणतर्फ आकृष्ट हु“दै) फेरि यो हुरीबतास अप्रत्याशित रूपमा आज कित बह“दैछ । के थाहा मानिसको जीनमा कहिले पनि अप्रत्याशित तरिकाले घटना घट्न सक्छ । आखिर मानिस घटनाबाट नै जन्मन्छ, हर्ुकन्छ... अनि अन्त्य पनि एउटा घटनाबाट नै हुन्छ । -प्रसङ्ग बदल्दै) ओहो.... उहा“ पनि अहिलेसम्म आउनुभएन, केही पो भयो कि - मलाई किन यसरी डर लागिरहेको छ ।
नेपाथ्य	-	रजनी..... रजनी... ऐ रजनी...
रजनी	-	-आवाजतिर ध्यान दि“दै) यो बेला को आएको होला आवाज पनि चिनेजस्तो छ । -डराउ“दै ढोकातर्फ लम्बन्छे)
नेपथ्य	-	छिटो डोका खोल भन्या... छिटोछिटो..... -पुनः जोडले ढोका ढकढकाउ“छ)
रजनी	-	-बिस्तारै ढोका खोल्दै) को हो.... -
शरद	-	-प्रवेश गर्दै) के को आदर्शको नाटक गर्दैर्र्छौ - यस को� ाभित्र अपराध गन्हाइरहेको छ -को� ाभरि शङ्कालु दृष्टिले नियाल्दै) यो त्रि्रो मुखुण्डोले ढाकिएको अनुहारले आमर्ूतभावमा अपराध दर्शाउ“दै बुझयौ“ -
रजनी	-	तपाईं... तपाईं यो के भन्दै हुनुहुन्छ -
शरद	-	म यो भन्दैछु - तिमी मेरो पत्नीको घुम्टो ओडेर नाङ्गो नाच देखाइरहेको छौ । मेरो छातीमा विश्वासघातको छुरी रोपिरहेकी छौं �
रजनी	-	-आर्श्चर्य मान्दै) मैले तपाईंको कुरा बुझिन, मैले त्यस्तो के कार्य गरेर -
शरद	-	-व्यङ्गयसाथ) वाह ..... बुझनु सकिन ..... मेरो अगाडि चोखो बन्ने कोसिस नगर, अनि मेरो सामु पत्रि्रताको नाटक पनि गर्नु पर्दैन र अर्को कुरा सुन कसैले पनि आ“खामा पट्टी लगाउन सक्दैन ...... �
रजनी	-	-रुन खोज्दै) तपाईं ममाथि शङ्का गर्दै हुनुहुन्छ । आखिर मैले के त्यस्तो काम गरे जुसले तपाईंलाई आघात पुर्यायो । यो एकान्त घरमा राति अबेरसम्म तपाईंलाई पर्खेर बसे अहिलेसम्म खाना पनि खाएको छैन, फेरि ममाथि सायद तपाईं नारी भएको भए एउटी नारीका....
शरद	-	मेरो अगाडि भाव पोखेर आदर्श छाट्नु पर्दैन । कुनै पनि अपराध लुक्न सक्दैन । एक दिन अपराध माथिको पर्दा उघ्रने छ । त्यसपछि यहा“ भूकम्प आउनेछ अनि यो सानो संसार टुक्राटुक्रामा परिणत हुनेछ । त्यस बेला न त्रि्रो अस्तित्त्व यहा“ रहनेछ, न मेरो नै.... क थाहा फेरि यस्तो संसार यहा“ बस्नेछ...... जसको कारकतत्त्व तिमी नै हुनेछौं ।
रजनी	-	-रु“दै) मलाई विश्वास गर्नुहोस्... म हजुरको पाउ“m पर्छर्ुु. मैले त्यस्तो कुनै कार्य गरेको छैन ।
शरद	-	के यो गोहीको आ“सुको विश्वास गरु“ - के म बिर्सर्ूूयत्रोबेरसम्म ढोक ढकढकाउ“दा पनि ढोका नखोली... म कसरी बिर्सर्ूूयो क्षण यस को� ामा पस्तुअघि कुनै पुरुषस“ग गफ गरिरहेको । भन त्यो को हो र कहा“ छ - त्यो विषालु गोमन जसले मेरो इज्जत र खुसीमाथि ढसिरहेको छ । भन त्यो को हो - अनि मात्र विश्वास गर्छर्ुु
रजनी	-	कोही होइन । यहा“ कोही पनि आएको छैन । तपाईं विश्वास गर्नुहुन्न - आज मैले सार्है नराम्रो सपना देखे त्यसेका प्रभावमा म एक्लै बर्बराइरहेको थिए । -रु“दै) म निर्दोष छु ।
शरद	-	मलाई भ्रममा पार्ने कोसिस नगर । आज मात्र होइन प्रत्येक मेरो अनुपस्थितिमा तिमी कुनै पर-पुरुषको आलिङ्गनमा हुने गर्र्छौ, जसको मौन सङ्केत यहा“को वातावरणले दिइरहेको छ ।
शरद	-	-� ट्टयौली भागमा) के को हल्ला - के भइरहेको छ तिमीहरूलाई ग्रह नमिलेजस्तो छ नि -हा“स्छ) ।
शरद	-	ओ हो राजे � आइज बस् न ।
राजेश	-	अति के भो - राति म त“लाई छोडेर गइहाले ।
शरद	-	के हुनु यार � हिजो अति बढी पिइएछ । त्यसैले रातभरि बाहिर नै सुत्यिो । जब यहा“ आइयो र जुन गुनगुन गरेको आवाज यहा“ सुने.. ढोका ढकढकाएरभित्र पसे तर...
राजेश	-	तर के भो..... -
शरद	-	त्यो हरामी उम्किहाल्यो । आजदेखि त झन तैले भनेको कुरामा मलाई पर्ूण्ा विश्वास भयो ।
राजेश	-	मेरो विश्वास गर यार � म साथीको लागि जे पनि गर्न तयार छु । मलाई भन मात्रै न आकाशको तारा भए पनि खसालिदिन्छु । त भइन्जेल नडरा । म यहा“ निरीक्षण गरिरहन्छु ।
शरद	-	त्यो त भन्न पर्दैन । तँप्रति मेरो पर्ूण्ा विश्वास छ । आज चाँडै नै काममा जानु छ । फेरि यहा“ बस्नेसमेत मन छैन । आज खाना पनि बाहिर नै खानु पर्ला जाऊ हि“ड ।
राजेश	-	हि“ड न त जाउ“m । -दुवै जान्छन् उदास अनुहार लिएर रजनीको प्रवेश)
रजनी	-	सायद भगान्ले मानव सृष्टिमा पक्षपात गरेको छ
नत्र किन त यो पुरुष र नारीबीच यो भेदभावको गहिरो आडल - कस्तो विडम्बना कस्तो अन्याय � -टोलाउ“छे, ओहरदोहर गर्छर्ेे लामो सुस्केरा हाल्दै । शून्यतामा हेदर्ैर्ैैपहिले त्यति माया गर्ने मान्छे । किन केही दिन यतादेखि उनमा परिवर्तन आइरहेको छ - लाग्छ कुनै सकुनीको पासोमा फस्नुभएको छ आज पनि खाना खान आउनु हुन्न जस्तो छ । कस्तो मेरो भाग्य....
रजनी	-	अबर्ुइ... र्-तर्सदै राजेशतर्फ र्फकन्छे) राजेश बाबु तपाईंले यो के गरेको यस्तो मलाई मन पर्दैन ।
राजेश	-	-कुटिल मुस्कानमा) भाउजूलाई मन पर्दैन... तर मलाई त भाउजू नै असाध्यै मनपर्छ.... -हा“स्छ) त्यसैले त...... ।
रजनी	-	के त्यसैले.. हाइन्दा दाइ नभएको बेलामा यहा“ नआउनुहोला.......... गइहाल्नोस् यहा“बाट ।
राजेश	-	भाउजूलाई त रिस पो उ� ेछ ...... सरी.... साँच्चै तपाईं कति सोझी हगि � शरद दिनै पिच्छे नयाँनयाँ केटीहरूसित रेस्टुरेन्टमा रमाइलो गर्छ । राति उतै सुत्छ । तपाईं भने -व्यङ्गय हा“स्दै) यो उमेरमा पनि ओ� टोकेर बस्नु हुन्छ । कस्तो विडम्बना.... च्व... च्व... विचरा -अगाडि बढ्दै) आखिर यो दर्ुइ दिने जिन्दगीमा के छ भाउजू एक दिन मर्नै पर्छ । त्यसैले आउनुहोस् -हात फैलाउ“दै) तपाईं-हामी अन्तरिक्षको रमाइलो यात्रमा निस्कौं ।
रजनी	-	-पछि हट्दै) राजेशबाबु � यस्तो कुरा मस“ग नगर्नुहोस् र अगाडि बढ्ने कोसिस पनि । उहा“प्रति मेरो पर्ूण्ा विश्वास र आस्था छ । अनि म एउटी पत्रि्रता नारी हु“ बुझनुभो - बरु तपाईं यहा“बाट तुरुन्त गइहाल्नोस्-नत्र राम्रो हुने छैन ।
राजेश	-	गइहाल्नु.... - -हा“स्दै) आज म यति सजिलै जान्न । आज म तपाईंलाई इज्जत लुट्नको लागि डाँकाको रूप धारण गरेर आएको छु । तपाईंको यो सतत्त्व रूपी धनमाथि मेरो गिद्धे आ“खा धेरै दिनदेखि परेको थियो । आज त्यो सौभाग्य हात आएको छ । भन्नुस्-कसरी उम्बन दिऊ - -गोजीबाट रक्सीको बोतल झिकेर पिउ“दै) उसको आनन्द पनि के कम छ र... -अट्टाहा“स लगाउ“छ)
रजनी	-	-डराउ“दै) राजेशबाबु � किन तपाईं राक्षस बन्नुहुन्छ । आखिर तपाईंको आमाचेली समान हु“ । मलाई छोडिदिनुहोस् ।
राजेश	-	-हा“स्दै) मैले यो संसारको सबै आइमाईलाई आमा र चेली सम्झे भने कसलाई स्वास्नी बनाउने.... कसलाई पौरुषत्व देखाउने.. - त्यसैले न मेरो आमा नै छिन् न त चेली नै... केवल विलासिताको साधन ।
रजनी	-	-भाग्दै) गुहार ..... गुहार....
राजेश	-	जति चिच्च्याउन मन लाग्छ चिच्चा-घोक्रो सुक्छ तेरो । तर कसैले सुन्दैन तेरो गुहार....... । तेरो लोग्ने मेरो जालमा फसे पखेटा लगाइसक्यो । बरु चुप लागेर मलाई साथ दे... -झम्टन्छ)
रजनी	-	यो हुन सक्दैन कुकुर -भाग्छे).......
राजेश	-	हुन्छ हु“दैन त्यो त अहिले थाहा हुन्छ -समाउ“द रजनी फुत्किन्छे । भाग्ने क्रममा रजनीले लौरो भट्टयाउ“छे र त्यसले प्रहार गर्छर्ेे)
राजेश	-	-टाउको समाउ“दै कम्पित र क्रुद्ध स्वरमा) � ीक छ... दुध दिनै गाईको लात सहनर्ुपर्छ भन्थे-यही सही... तर तेरो प्रत्येक अङ्गहरू आज..... (पुनः समाउन खोज्छ । रजनी भाग्दै भगवतीको तस्वीर समाउन पुग्छे ।)
रजनी	-	मलाई बचाउनुहोस् माता .... बचाउनुहोस् । -राजेश फेरि समाउन पुग्छ । रजनी फुर्तीसाथ सिरानी मुनिको खुकुरी झिक्छे । खुकुरी देखाउ“दै - आइज राक्षस.... आजि म तेरो संहार गर्छर्ुुसरी भगवतीले महिषासुरको वध गरेको थिएन । आज म भगवतीको रूप लिएर त वास्नाको पुजारी तेरो वध गर्ने छु..... (नाङ्गो खुकुरी लिएर ऊ अगाडि बढ्छे राजेशपछि हट्दै ढोकोमा पुग्छ)
राजेश	-	� ीक छ... आज म पराजित भएर जा“दैछु । तर याद राख भोलिको दिन यस धरतीमा तेरो अस्तित्त्व रहने छैन । (जान्छ)
रजनी	-	-विजयको अट्टास“ग गर्दै) त्यो भाग्यो... भाग्यो � नारीले पनि आङ्खनो मुक्तिको लागि सर्‹ष्ा गर्नुर्छि । साहस बटुल्नर्ुर्छि । उसले पनि यहा“ केही गर्नुपर्छ... केही गर्नुपर्छ...
शरद	-	गर्नुपर्छ भन्दैमा जे पनि गर्न पाइ“दैन । लाज लागदैन नकचरी-रातभरि नभएर पनि दिनभरि पनि ना� ो खेलाउनु पर्छ � के यो बेश्यालय हो -
रजनी	-	-दुवैकान थुन्दै) नाई... तपाईं यो के भन्दै हुनुहुन्छ -
शरद	-	-हिर्काउन खोज्दै) चुप लाग् ‹ मेरो साथीलाई त कुटाइस् अब मलाई पनि कुटाउने विचार छ - पहिले त्यो तेरो बहादुरलाई...
रजनी	-	-रु“दै) तपाईंको साथीले मेरो सतित्त्वमाथि हात लगाउन खोज्यो... मेरो इज्जत लुट्ने कुचेष्टा गर्यो ।
शरद	-	-व्यङ्ग) होला... सिधै किन भन्दिस्- तिमीहरूबीच अवरोध भएर उभिदियो ‹ अझ म र राजेशबीच फाटो ल्याउन खोज्दैछस् । कुरा लुकाउन खोज्दैछस् । मलाई सब थाहा छ ।
रजनी	-	(रु“दै) तपाईं...
शरद	-	सबैले भन्थे- दुध खुवाएर पालेको र्सपले एक दिन डस्छ- आखिर त्यही भयो । सायद मैले प्रेम गरेर � ूलो गल्ती गरेछु । जसको साथ र माया पाएर म यस धर्तीमा र्स्वर्गको अनुभव गर्न चाहन्थे । त्यसैले हजारौ“ बाधाहरूको सामना गर्दै यो आकाश र धर्ती अनि यहा“को समाजलाई साक्षी राखी सिन्दूर र पोतेले सम्मानित गरे । तर मलाई के थाहा जसलाई मैले जुन स्थान दिए त्यो त गन्हाउने रछयानमा रहैने वसतु रहेछ । जो त्यसैमा बसन रमाउ“छ आज त्यही सिन्दूर र पोतेले मलाई सरापिरहेछ । -एक्कासी आवेगमा रजनीको गलाको पोते चुडाउ“दै) अब यो पवित्र बन्धन यो गलामा खुल्दैन -फेरि टेबलमा राखेको जगको पानीले सिउ“दोमा खन्याउ“दै) यो पवित्र सिन्दूर पनि यो सिउ“दोमा मेरो पत्नी बनेर फुल्दैन आजदेखि तेरो मे।रो बचि जुन सम्बन्ध थियो- सम्झी सदाको लागि समापत भयो । त्यसैले यस को� ाको छतमुनि बस्ने तेरो कुनै अधिकार छैन । निस्किहाल गैहाल -बाहिर निस्कन खोज्दै) म फर्केर आउ“दा तेरो छायासम्म देख्न नपरोस् बुझसि् -निस्कन्छ । रजनी रु“दारु“दै बेहोस भएर लड्छे केही समय पश्चात् बिस्तारै उ� ेछ)
रजनी	-	आमा...आमा... अब म कहा“ जाऊ । (भूइ“को पोते टिप्दै)
यो पोते जसले मेरो पत्रि्रताको गवाही दिन सकेन । यो सिन्दूर -पखालिएको सिन्दूर छाम्दै) जसले मेरो पतिलाई विश्वास दिलाउन सकेन । यो अमर्ूत साक्षी बाहेक म अरुको ल्याउ कसरी मैले सिवश्वास दिलाऊ । जब राजेश नामको राक्षसको जालमा मेरो पति कहिल्यै नछुट्ने गरी फसिसकेको छ... हे भगवान् अब म कहा“ जाऊ... भगवान् प्रत्येक नारीलाई यस्तो हारेको जुनी किन दिन्छौ“... किन..- -रु“दै को� ाको प्रत्येक निरिक्षण गर्दै) अब म यो धर्तीमा बा“च्न सक्दिन“ । न म यो रित्तो गला र पुछिएको सिउ“दो बोकेर यो समाजमा रहन नै सक्छु... सहारा बिनाको लहरा बनिसके.. भगवान् अब म त्रि्रो शरणमा आउ“दै छु... -को� ाको प्रत्येक वस्तुलाई पुनः मायालु दृष्टिले नियाल्दै बाहिर निस्कन्छे अ“ध्यारो हुन्छ)
(रातको १०.०० बजेको घण्टा लाग्छ । शरद मातिएर को� ामा प्रवेश गर्छ) ।
शरद	-	-लरबराएको सवरमा) त्यो बेश्या गइछ , � िकै भयो । त्यसले मेरो इज्जत सबै माटोमा मिलाइदिई । आज म समाजको अगाडि नाङ्गो भए । -कपडा खोल्दै) त्यस नक्कलीले मेरो साथी राजेशलाई झण्डै मारेको मोका पाएको भए मलाई पनि मार्ने थिई । -पागलभै“m) ऐ नक्कली तेरो ना� ोलाई यहा“ लया -छुरी झक्िदै) त्यसलाई एकैचोटिमा... अनि त“ पनि आइज... यसैले सिध्याइदिन्छ । र्-बर्बराउ“दै छुरी सिरानीमुनि राख्छ र सुत्छ । निस्तब्ध रातमा टाढा कतै लाटोकोसेरोको आवाज आउ“छ । यस्तैमा टाउकोमा सेतोपट्ट िलगाएर राजेश र्सतकका साथ को� ामा प्रवेश गर्छ । ओच्छयानमा दृष्टि लगाउ“छ । खुशीको मुसकान छाउ“छ । ज्याकेट र बेलट खोलेर एकतर्फफाल्छ । कामुक मुसकान र्छर्दै ओच्छयानतिर बढ्छ) ।
राजेश	- आज मेरो इच्छा पुरा हुने भो... तेरो यौवन रूपी वृक्षको प्रत्येक हा“गा पातसमेतलाई धुजाधुजा पार्ने छु । एक्कासी सुतिरहेको शरदलाई अ“गालो हाल्न पुग्छ । शरद हडबडाउ“दैय� ्छ र राजेशमाथि छुरी झकिेर प्रहार गर्छ । राजेश ढुनमुनि“दै बाहिर निसकन्छ । शरद पुनः झम्टन्छ बाहिर � ूलो चिच्चाहटस“ग केही वसतु ढलेको आवाज आउ“छ ।
शरद	-	र्-थर्रर काम्दै साले मर्यो । मलाई मार्न आएको थियो- आफै मर्यो । -केही सोचेर) मैले यी हातहरूले हत्या गरे । म हत्यारा हु“ । मैले सजाय पाउनर्ुपर्छ... आज म कसरी हिंसामा बदलिन पुगे... कसरी आज म अपराधी बने... म हत्यारा बने... हो... हो... म अपराधी हु“ । -को� ामा साधारण भेषभूषामा एउटा युवकको प्रवेश हुन्छ जसको हातमा रगतले मुछिएको छुरी हुन्छ ।)
अवशेष	-	-शरदतर्फछुरी देखाउ“दै) ओ महाशय � म अपराधी बन्छु भनेर कसैले पनि कल्पना गर्दै बाजा बजाएर पनि आउ“दैन । एउटा अप्रत्याशित घटेको घटनाबाट अपराध सिर्जना हुन्छ । परिबन्धले भनौ“ या आजेगले मानिसलाई अपराधी बनाउ“छ ।
शरद	-	-डराउ“दै तपाईं... तपाईंको हो... अनि यो छुरी..
अवशेष	-	म त्रि्रो मुक्तिदाता यो छुरी तिमीलाई मानृ होइन बचाउन ल्याएको हु“ । तिमी कसैको पासोमा बा“धिएका छौ“ । त्रि्रो त्यही पासो काट्न ल्याएको । आज म रजनी र तिमीबीच भएको तनावको रहस्य खोल्दैछु ।
शरद	-	कस्तो रहस्य... त्यो नकचरी अब यहा“ छेन ।
अवशेष	-	चुप लाग... सती सावित्री जस्ती पत्नीमाथि तिमीले धेरै अन्याय गर्यो, अत्याचार गर्यो । कसैले तिमीलाई जालमा फसाएर फाइदा लुटेको तिमीले बुझेनौ । तिमी मानिसको आवरणभित्र लुकेको पशु हौ ।
शरद	-	तपाईं यो के भन्दै हुनुहुन्छ -
अवशेष	-	म जे भन्दैछु � िकै भन्दैछु -नम्र भएर) यस परिवारको प्रत्येक स्थितिस“ग म परिचित भइसकेको छर । जुन राजेशलाई तिमीले विश्वास गर्यो जुन राजेशमाथि त्रि्रो पर्ूण्ा विश्वास थियो त्यसले त्रि्रो आ“खामा पट्टी बा“धिदियौ- त्यही अन्धोपनमा तिमीले आङ्खनो सीताजस्ती पत्नीलाई चिन्न सकेनौ“ । त्यही त्रि्रो विश्वासनीय साथी राजेशले त्रि्रो पत्नी रजनीलाई बलात्कार गनेृ कुचेष्टा गरेको थियो, इज्जत लुट्न खोज्यो त्यसबेला उसले कसरी आङ्खनो सतित्त्व बचाइन तिमीले बुझने कोसिस गर्यौ - बस � तिमी त अन्धो थियो । त्रि्रो आ“खामा पट्टी बा“धिएको थियो । अघि आउने व्यक्ति पनि त्यही राजेश थियो । त्यसैको अवशेष हो यो ज्याकेट र बेल्ट
शरद	-	-बिस्तारै उ� ाउन जान्छ, उ� ाएर हर्ेर्दै) आज मेरो आ“खाबाट अविश्वासको पट्ट िहटयो । जसलाई मैले विश्वास गरे उसैले मलाई विश्वासघात गरेछ । म त्यसस“ग बदला लिने छु ।
अवशेष	-	बदला लिइसकेको छौ“ � बरु रजनीस“ग माफी माग र सुखी दाम्पत्य जीवन बिताउने कोसिस गर -चु“डिएको पोते दि“दै) शरद तिमीले यो चु“डिएको पोते पुनः गा“स्नर्ुपर्छ । रजनीको पुछिएको सिउ“दो फेरि रङ्गाउनर्ुपर्छ ।
शरद	-	तर... तर... अब म रजनीलर्“इ कहा“ खोजौ“ । ऊ मबाट टाढा गइसकी । अब त मलाई घृणा पनि गर्छिन् होली सा“च्चै म पापी हु“... पापी हु“...।
अवशेष	-	रजनी कही“ गएकी छैनन् अझ पनि उनको हृदयमा त्रि्रै मर्ूर्ति छ । आऊ अस्पतालको बेड नं. १०१ मा जहा“ त्रि्रै प्रतिक्षामा बसिरहेकी छिन् ।
शरद	-	-आर्श्चर्य) अस्पताल.. के भो उनलाई -
अवशेष	-	बा“की उनैबाट थाहा हुनेछ । जाऊ चा“डो आऊ । नत्र फेरि अर्को घटना घट्न सक्छ । (शरद जान्छ । अवशेष यसैलाई हेरिरहन्छ । बिस्तारै को� ा नियाल्छ हातको छुरी हर्ेछ)
अवशेष	-	उपm... म कस्तो सङ्कटमा पदैृछु । सायद प्रत्येक मानिसमा यसरी नै अप्रत्याशित रूपमा घटना घट्छ होला -सम्झ“दै) मैले रजनीलाई त पोखरीबाट झकिेर आत्महत्या गर्नबाट बचाए तर मैले उनलाई कर्म दिन नपाउ“दै अर्को घटनाको सामना गर्न पर्यो । के जीवन नै घटना हो त - जसको सर्‹ष्ा गर्दागर्दै अन्त्य हुन्छ । -छुरी हर्ेर्दै झस्के जस्तो गर्छ) अह“... अह“... म अपराधी होइन...म...म...ज्यानमारा होइन । -सुन्यतामा हर्ेर्दै)
रजनी	-	-रु“दै) दाजु � तपाईंले मलाई पुनर्जीवन दिनुभयो, मलाई बा“च्ने रहर त थिएन तर दाजु तपाईंले मलाई बचाएर तपाईंको चेली हुने सौभाग्य पाए अब म बा“च्न चाहन्छु, दाजु बा“च्न चाहन्छु । प्रत्येक भाइटिकाको दिन सपतरङ्गी टिकाले तपाईंको निधार सजाउनेछु...
अवशेष	-	अवश्य � प्रत्येक भाइटिकाको दिन मेरमे लागि सौभाग्यको दिन हुनेछ � आजदेखि एउटा दाजुको कर्तव्य निभाउने छु म � बहिनकिो आ“खामा आ“सु होइन, ओ� मा मुस्कान ल्याउनेछु, खुशीले भरिदिने छु त्रि्रो जीवन..
हो बहिनी � म कसम खान्छु � त्रि्रो पुछिएको सिउ“दो हर्ैन सक्दिन“ म � त्रि्रो संसार उजडिएको देख्न चाहन्न � त्रि्रो खुशीको लागि म.. म... म नै हत्यारा बनेर जेल जान्छु � म मेरो बहिनीलाई खुशी दिन्छु । म...म... हत्यारा हु“... अपराधी हु“...
म...म हत्यारा भए... -चिच्च्याउ“छ)... म...म...हत्यारा...
इन्स्पे.	- मिस्टर अवशेष हामी तपाईंलाई गिरङ्खतार गर्न आएको � त्यसैले आत्मा मिर्पण गर्नुस् ।
अवशेष	- -डराउ“दै) किन... मलाई किन -
इन्स्पे.	- तिमी हत्यारा हो । तिमीले राजेश नामको व्यक्तिको हत्या गरेका छौ ।
अवशेष	- हत्या... हत्या... -सम्झेभै“m) हो... हो... म नै हत्यारा हु“... म नै राजेशको हत्यारा हु“ । -रजनी र शरदको प्रवेश)
रजनी	- दाजु हामी आयौ -आर्श्चर्य) यो के हो... यहा“ के भयो दाजु... अघि -प्रहरीतर्फदेखाउ“दै)
अवशेष	- बहिनी � मैले राजेशको हत्या गरे“ ।
शरद	- होइन मैले मारेको हो इन्स्पेक्टर साब ।... उहा“ झू� बोल्दै हुनुहुन्छ ।
इन्स्पे.	- त्यो हो भने -दुवैलाई पक्रने आदेश दि“दै) हथकडी लगाउ दुवैलाई ।
अवशेष	- यो हुन सक्दैन हत्या मैले नै गरेको हु“ । मैले मेरो बहिनीको लागि राजेशको हत्या गरे । उसलाई मारेर यो को� ामा पसेको हु“ । नपत्याए यी यो छुरी हर्ेर्नुहोस् जसले तातो रगत पिएर अझै मेरो हातमा हा“सिरहेको छ ।
रजनी	- (रु“दै) दाजु यो के भयो -
अवशेष	- केही होइन बहिनी, मात्र एउटा अप्रत्याशित घटना हो । वो घटयो भूतकाल भयो । वर्तमान यसते रहयो । दुःख नमान बहिनी � भविष्यमा कुने दिन त्रि्रो हातले गा“सेको गोदावरी र मखमली फूलको माला र सपतरङ्ग टीका थापन अवश्य आउनेछु ।